Screen Lock - Time Password 1.9.2 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.9.2 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Application မ်ား ကိရိယာမ်ား Screen Lock - Time Password
Screen Lock - Time Password ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
သင်ဖုန်းကိုသော့ဖွင့်နေချိန်မှာသင့်ရဲ့ PIN ကိုဖော်ထုတ်စိတ်ပူဖြစ်ပါသလား
ဤတွင်မျက်နှာပြင် Lock ကိုကြွလာ - ထို rescue.You ဘို့အချိန် Password ကို (Dynamic Password ကို) သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုလက်ရှိအချိန်ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်င်း၏မျက်နှာပြင်သော့ password.And အချိန်တိုင်းမိနစ်ပြောင်းလဲဒါကြောင့်လည်းစကားဝှက်ကိုမဒါအဘယ်သူမျှမပင်ကခန့်မှန်းနိုင်ပါ။
★သင့်ရဲ့ android များအတွက် iPhone ကိုစတိုင်သော့ခတ်မျက်နှာပြင် Cool ။
★ android ဖုန်းရဲ့အများဆုံးအပေါ်ပံ့ပိုးမှု။
★ Highly လုံခြုံသော့ခတ်မျက်နှာပြင်။
★ကအကောင်းဆုံး Parallax အကျိုးသက်ရောက်မှု Lock ကိုတစျခု။
✔ သော့ခတ်မျက်နှာပြင် အဘို့အဝေါလ်ပေပါကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်
သငျသညျ, HD Screen ကိုဝေါလ်ပေပါ apply သို့မဟုတ်ပြခန်းမှရွေးချယ်နိုင်သည်။
✔ကို disable / enable သံကို Unlock ။
✔တုန်ခါမှု Unlock ကို disable / enable ။
နှစ်ဦးစလုံးထောက်ခံ✔ 12 နာရီနှင့် 24 နာရီ format နဲ့။
✔လျော့နည်း memory နဲ့ဘက်ထရီရိုးရှင်းသောနှင့်သန့်ရှင်း device ကိုစားသုံးကြသည်။
✔ 100% လုံခြုံပြီးလုံခြုံ Screen ကို Lock- အချိန် Password ကို
✔ သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သော့ခတ်အမျိုးအစား Choose
သင်သည်သင်၏ android ဖုန်းမှ (သည် dynamically passcode ပြောင်းလဲမှု) ကို lock သင့်ကိုယ်ပိုင်လမ်းကိုရွေးနိုင်သည်။
လက်ရှိအချိန်►: ဒါဟာသင့်ရဲ့သော့ခတ်မျက်နှာပြင်၏ default အစကားဝှက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ, အချိန်ကို 01:47 ဖြစ်တယ်ဆိုရင်, သင့်ရဲ့ PIN ကို 0147 ဖြစ်လိမ့်မည်။
Pin passcode ► - အသုံးပြုသူမည်သည့် password ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
ဥပမာ, - Pin + မိနစ် passcode ► သငျသညျဂဏန်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါလျှင် 12 နှင့်အချိန် 01:45 သင့်ရဲ့ PIN ကို 1245 ပါလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ဥပမာ, - Pin + လက်ရှိအချိန် passcode ► သင့်ရဲ့ရှေးခယျြဂဏန်း 45 နှင့်အချိန် 02:37 သင်၏ PIN 450237 ဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးလျှင်။
Pin + နေ့ passcode ► - ဥပမာ, သင့်ရဲ့ရှေးခယျြဂဏန်း 45 နှင့်ရက်စွဲကိုဇူလိုင်လ4ရက် 2017 ဖြစ်ပါတယ်သင့်ရဲ့ PIN နံပါတ် 450407 ဖြစ်လိမ့်မည်။ လျှင်
ဥပမာ, - Pin + နာရီ passcode ► သငျသညျဂဏန်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါလျှင် 12 နှင့်အချိန် 01:45 သင့်ရဲ့ PIN ကို 4501 ပါလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
--- မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ ---
★ ဝှက်ထားသောမျက်နှာပြင် Lock ကိုဖွင့်လှစ်ဖို့ကိုဘယ်လို - အချိန် Password ကို?
1. dial pad ပါနှင့်ထိပုတ်ပါခေါ်ဆိုခခလုတ်ကိုအတွက် # 666 #6ရိုက်ထည့်ပါ။
★ ဘယ်လို Xiaomi က / MI ဖုန်းများသော့ခတ်နည်း
►Xiaomi / MI ဖုန်းများကွဲပြားခြားနားခွင့်ပြုချက်စီမံခန့်ခွဲမှုစတိုင်ရှိသည်။ Screen ကို Lock ကိုသုံးစွဲဖို့ - Xiaomi က / MI ဖုန်းများပေါ်တွင်အချိန် Password ကို အောက်ပါအဆင့်များအတိုင်းဆောင်ရွက်ပါ။
1. Open ကိုလုံခြုံရေး App ကို -> ခွင့်ပြုချက်။
> Screen ကို Lock ကို - - 'option ကိုခွင့်ပြုချက် Choose အချိန် Password ကို -> အားလုံးခွင့်ပြုချက်တွေကို Allow ။
အော်တို Start ကိုအချိန် Password ကို -> Screen ကို Lock ကို Allow - အော်တို Start ကို> - 2. ပြန်ခွင့်ပြုချက်များသွားပါ။
android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED: အဖြစ်မကြာမီက Restart ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်အဖြစ် device ကိုသော့ခတ်ရန်
Screen ကို Lock ကို - အချိန် Password ကိုသင့်ရဲ့မဆိုသတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းမည်မဟုတ်။
Screen Lock - Time Password အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Screen Lock - Time Password အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Screen Lock - Time Password အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Screen Lock - Time Password အား အခ်က္ျပပါ
superuser4k စတိုး 45.81k 26.47M
Screen Lock - Time Password ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Screen Lock - Time Password အခ်က္အလက္
ထုတ်လုပ်သူ Adria Devs
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.dropbox.com/s/v24mu9891uuusum/adria_devs_privacy_policy.pdf?dl=0
လက်မှတ် SHA1: AC:EE:EB:0B:AA:EE:51:8D:5E:D3:33:9A:AF:D1:81:80:39:AE:DD:BB
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Adria Devs
အဖွဲ့အစည်း (O): Adria Devs
Screen Lock - Time Password APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ